भारतलाई घुँडा टेकाउने मौका यहि हो - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Interview भारतलाई घुँडा टेकाउने मौका यहि हो
Domain Registration Nepal प्रकाशित समय 1:53:00 AM
जुन देशमा हिमाल छ, १३ वटा मौसम छ, साहसिक पर्यटनको यत्रो स्कोप छ भने, त्यो देशले आफैं बाँच्न किन सक्दैन ? केहि दिन दुःख हुन सक्छ । त्यसपछि हामी स्वाबलम्बी बन्नेतर्फ लम्किन्छौं
छन् । उसको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ संघीयता नै हो । नेपालमा संघीयता भित्र्याउने नै भारत हो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसादले साना पार्टीसित तीन रामहरु (रामवरण, रामचन्द्र र रामशरण)लाई छलफल गर्न लगाएका थिए । त्यो छलफलमा अहिलेका राष्ट्रपति राववरणले नै खुलासा गरेका थिए, भारतले संघीयताका लागि थाम्नै नसक्ने दबाव दिइरहेको छ भन्ने कुरा ।
राजतन्त्रकालमा भारतीय राजदूत सोझै नारायणहिटी छिरेर राजालाई हप्काउने हिम्मत गर्दैनथे । अहिले त तराई मूलको राष्ट्रपति भारतलाई घरकी मुर्गी दाल बराबर भएको छ
सीमा बन्द गरिदियो भने १० वर्षपछि तराईमा बसेका नागरिक सबै मुलधारमा मिसिन्छन् । उनीहरुलाई कसैले पनि भारतीय ठान्दैनन् । सबै नेपाली एकनास हुन्छन् ।
ओलीको स्वभाव अडिने देखिन्छ । तर ,उनको अघिपछि र दायाँबायाँ को छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ ? दाइने गोडामा छिर्के हान्न माधव नेपाल तयार छन्
कमै आशा छ । तर, यदि अडे भने सुखद आश्चर्य हुने छ । त्यसपछि हामी सुल्टो बाटो लाग्छौं । भारतको दवावमा आफ्नो सल्लाहरकारलाई राजीनामा दिन लगाउने, भारतले विज्ञप्ति जारी गर्नासाथ दौडेर महन्थ ठाकुरकहाँ पुग्ने सुशील कोइरालाबाट चाहिँ केहि आशा छैन ।